कसरी आईओएस .8.4.1..8.4.१ बाट आईओएस .XNUMX..XNUMX मा डाउनग्रेड गर्ने आईफोन समाचार
कसरी आईओएस .8.4.1..8.4.१ बाट आईओएस .XNUMX..XNUMX मा डाउनग्रेड गर्ने
तपाईलाई सबैले थाहा छ, एप्पलले आईओएस .8.4.1..XNUMX.१ लाई बिहीबार रिलिज गर्‍यो र उपलब्ध नभएका औजारहरूसहित untethered जेलब्रेक गर्ने सम्भावनालाई बन्द गर्यो। शुभ समाचार यो छ कि सौरिकले जारी गर्‍यो साइडिया इम्पेक्टर, जसले हामीलाई हाम्रो आईफोनबाट सीधा पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ/ आइपड वा आईप्याड हामीलाई जेलभ्रेक सम्भावित संस्करणमा राख्नको लागि र त्यो एप्पलले पछिल्लो संस्करणमा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा पहिले लामो समयसम्म उचित समयको लागि अनुमति दिएको छ यसलाई रोक्नको लागि, अद्यावधिक गर्दा, हामी एक सम्भावित गम्भीर असफलताको साथ छोडिन्छौं।
आईओएस .8.4..XNUMX साइन इन भएसम्म डाउनग्रेड गर्न सकिन्छ र यसको साथ, हामी हाम्रो आईफोन / आईपड वा आईप्याड भाग्न सक्दछौं। विधि एकदम सरल छ, तपाईले मात्र .ipsw फाईल पुन: भण्डारण गर्नु अघि प्राप्त गर्नु पर्छ। हामी तपाईंलाई जम्प पछि तपाईंलाई आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं।
1 कसरी आईओएस .8.4.1..8.4.१ बाट आईओएस .XNUMX..XNUMX मा डाउनग्रेड गर्ने
2 iOS .8.4 ..XNUMX.१ अब साइन इन छैन
iOS .8.4 ..XNUMX.१ अब साइन इन छैन
पृष्ठमा जानुहोस् ipsw.me लागि जाँच गर्नुहोस् कि आईओएस .8.4..XNUMX अझै हस्ताक्षर गर्दै छ.
हामी हाम्रो संस्करण चयन र यसलाई डाउनलोड। हामीसँग आईफोन / आइपड वा आईप्याडको कुन मोडेल हो भनेर जान्नको लागि यसलाई बाकससँग परामर्श लिन उत्तम हुन्छ।
हामी हाम्रो उपकरण कम्प्युटरमा जडान गर्दछौं.
हामी मेरो आईफोन फेला पार्ने निष्क्रिय गर्छौं सेटिंग्स / iCloud बाट।
हामी आइट्यून्स खोल्छौं र हामी हाम्रो उपकरण छनौट गर्दछौं माथिल्लो बाँयामा।
con alt थिचिएको (विन्डोजमा शिफ्ट) हामी क्लिक गर्दछौं पुनर्स्थापित गर्नुहोस्.
विन्डोमा देखा पर्छ कि, हामी .ipsw फाईल छनौट गर्दछौं जुन हामीले चरण २ मा डाउनलोड गर्यौं र स्वीकार्यौं।
अब हामीले उपकरण 8.4..XNUMX पुनःप्राप्ति र स्थापना समाप्त नभएसम्म कुर्नु पर्छ।
त्यहाँ यस्तो सम्भावना छ कि यसले तपाईंलाई पुनःबहाली गर्न दिदैन, तर यो DFU मोड जबरजस्ती गरेर समाधान गरिएको छ। यसको लागि हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
हामी आईफोन बन्द गर्दछौं/ आइपड वा आईप्याड।
हामी कम्प्यूटरमा आईफोन / आईपड वा आईप्याड जडान गर्दछौं।
हामी प्रेस गर्दछौं seconds सेकेन्डको लागि पावर बटन.
पावर बटन रिलीज नगरी हामी स्टार्ट बटन प्रेस गर्दछौं र हामी दुबै १० सेकेन्डका लागि समात्छौं.
हामी पावर बटन रिलीज गर्छौं र स्टार्ट बटन होल्ड गर्दछौं जब सम्म तपाईं आइट्यून्स प्रतीक देख्नुहुन्न यसले संकेत गर्दछ कि यो रिकभरी मोडमा छ।
अब हामी ट्यूटोरियलको चरण १ मा जान्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी आईओएस .8.4.1..8.4.१ बाट आईओएस .XNUMX..XNUMX मा डाउनग्रेड गर्ने
यो सम्भव छ कि मेरो फोनलाई त्रुटि १ १ बाट बचाउन को लागी जब मेरो आईफोन पुन: प्राप्ति गर्ने प्रयास गरी पुन: प्राप्ति मोडमा गएपछि 1..8.4.1.१ मा अपडेट गर्ने प्रयास गर्दा।
राल्फिसलाई जवाफ दिनुहोस्।
मलाई पनि त्यस्तै भयो, मैले तपाईको बारेमा बुझिनँ र यो मेरो स्नायुहरूमा जान्छ
त्यहाँ एन उपकरणहरू थिए, तर त्यहाँ शब्दकोश र कुनै व्याकरण वर्गहरू थिएनन्।
आज १:14:०05 स्प्यानिश समयमा, .8.4.। अझै हस्ताक्षर भइरहेको छ
कार्लोस रागो भन्यो
जब म पृष्ठ प्रविष्ट गर्दछु, एक ZIP फाइल मसँग डाउनलोड हुन्छ, र जब म यसलाई अनजिप गर्छु, केवल फाईलहरू र फोल्डरहरू देखा पर्दछन्, एक IPSW फाईल होईन। म यसलाई पुन: भण्डार गर्न कसरी देखाउन सक्छु?
कार्लोस रागोलाई जवाफ दिनुहोस्
पेड्रो बेनेडेट्टी गेम्स भन्यो
यो एकदम राम्रोसँग कार्य गर्यो र मैले सोचे कि मैले जेलब्रेक गुमाएको छु
पेड्रो बेनेडेट्टी गेम्सलाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलले अझै आईओएस signs..8.4 मा साइन इन गर्दछ म डाउनग्रेड गर्न चाहन्छु
SSSS लाई जवाफ दिनुहोस्
हस्ताक्षर राख्नुहुन्छ ??
नमस्कार मनु। तिनीहरूले धेरै दिन अघि (वा केहि हप्ता, मलाई सम्झना छैन) हस्ताक्षर गर्न रोके।
सामसु्गले नयाँ गियर S2 प्रस्तुत गर्दछ, यसको सबैभन्दा नयाँ स्मार्टवाच
मलाई लाग्छ एप्पल संगीत प्रतिस्पर्धा भन्दा राम्रो छ